के मात्र हुन बाँकी छ अब नेपालमा? आफ्नै छोराछोरीलाई विष सेवन गराइ आमा फरार – PathivaraOnline
Home > अपराध > के मात्र हुन बाँकी छ अब नेपालमा? आफ्नै छोराछोरीलाई विष सेवन गराइ आमा फरार
admin July 5, 2019 अपराध, समाज	0
असार २०,कलैया । बारा जिल्लाको सवर्ण गाउपालिका वडा नम्बर ४ देवापुर चौरहियामा एक आमाले आफ्नै ४ जना छोराछोरीलाई बीष खुवाएको छ । चौरहियाका लालबाबु मियाकी पत्नी रुसमा खातुनले आफनै ४ जना छोराछोरीहरुलाई भातमा बिष खुयाएर फरार भएको परिवारजनको आरोप छ । विहिबार बिहानै ९:३० बजेको समयमा खातुनले भात,दाल पकाई त्यसमा बिष मिसाएर आफना छोराछोरीहरुलाई खुवाएर फरार भएको रुसमाका काका ससुरा भिखारी मियाले बताए ।
लालबाबु भने भाई बुहारीको उपचारका लागि भारत गएको भिखारीले बताए । ‘आमाले यस्तो जघन्य अपराध कसरी गरिन् ?’ भिखारीले भने ,बच्चाहरु घरमा रोइरहेको सुनेर आउँदा वान्तागर्दै छट्टपट्टाइ रहेका भेटिएको थिए । बिष खानेहरुमा खातुनका ८ बर्षका छोरा न्यामुदिन मिया, २ बर्षका छोरा औलादिन मिया, ७ बर्षका छोरी सनाजा खातुन र ६ बर्षका छोरी मोजना खातुन रहेका छन् ।
विषसेवन गराइएका चारैजना बालबालिकाहरुलाई भिखारीले कलैया स्थित अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका थिए भने अहिले चारै जना सिकिस्त बालबालिकाहरु खतरामुक्त रहेको डाक्टर राहुल कर्णले जनाए । ‘अस्पतालमा आउदा पेट दुख्ने, अलिअलि बान्ता भइरहेको थियो ’डा.कर्णले भने, तर औषधी गरेपछि पेट दुख्ने र बान्ता आउने पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेको छ । उनीहरु चारैजनाले मुखवाट खानेकुराहरु खान थालेको र स्वास्थ्य अवस्था समान्य भएको कर्णले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायवउपरिक्षक (डीएसपी)रंजितसिंह राठौरले आमा फरार रहेकाले घटनाको यकिन कारण खुल्न सकेको छैन्’ उनले भने, विषसेवन गराइएको भनिएपनि कुन विषादी कति परिमाणमा सेवन गराएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन् । रुसमाको माइत भारतको लालछपरामा रहेको छ ।क्रुरतापूर्वक आफ्ना चार जना सन्तानलाइ विष खुवाएर फरार भएकाले व्यापक खोजी भइरहेको डीएसपी राठौरले जनाए । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।
प्रचण्ड बाबुराम बीच चल्यो जुहारीः मनांगे जस्ता “बौद्धिक”भएको “कमाउनिष्ट”पार्टीमा अरू किन?
श्रीमति अर्कैसंग लागेको थाहा पाएपछि पि’डा सहन नसकेर प्रहरी हवल्दारले गरे देहत्याग (भिडियो)
पैसा कमाएर परिवारकाे भविष्य बनाउन साउदी गएका श्रीमानले फिलिपिनीसँग मस्ती गरेर बसेर श्रीमतिलाइ डिभोर्स दिन दवाव दिएपछि रूदै आइन मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो)